Diyo post :: उर्जामन्त्रीको निर्देशनपछि आजदेखि उद्योग क्षेत्रमा पनि लोडसेडिङमुक्त, अब मुलुक लोडसेडिङमुक्त ! उर्जामन्त्रीको निर्देशनपछि आजदेखि उद्योग क्षेत्रमा पनि लोडसेडिङमुक्त, अब मुलुक लोडसेडिङमुक्त ! - Diyo post
उर्जामन्त्रीको निर्देशनपछि आजदेखि उद्योग क्षेत्रमा पनि लोडसेडिङमुक्त, अब मुलुक लोडसेडिङमुक्त !
काठमाडौं । सोमबारदेखि औद्योगिक क्षेत्रमा जारी रहेको लोडसेडिङ अन्त्य भएको छ । उर्जा मन्त्री वर्षमान पुन अनन्तले औद्योगिक क्षेत्रको लोडसेडिङ पनि अन्त्य गर्नका लागि नेपाल विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङलाई निर्देशन दिएका थिए ।
यसअघि २ देखि ४ घण्टासम्म औद्योगिक क्षेत्रमा लोडसेडिङ हुँदै आएको थियो । आईतबारदेखि नै उद्योग क्षेत्रमा लोडसेडिङ नभएपनि सोमबार सार्वजनिक गरिएको छ ।
‘आजदेखी नेपाल बिद्युत प्राधिकरणले औद्योगिक ग्राहकहरुको लोडशेडिङ मुक्त गरिएको सुचना सर्बजनिक गरिसकेको छ,’ प्रवक्ता प्रवलराज अधिकारीले भने,‘प्राधिकरणको अनवरत प्रयास पश्चात् देश लोडशेडिङ्मुक्त भएको खबरहरु समचार सम्प्रेषण भै देशैभरी फैलिंदा यसको श्रेय तपाइंहरुलाइ समेत जान्छ। हाम्रो उज्यलोतर्फको यात्रा चलिरहनेछ। तर बिद्युत सेवाको गुणस्तरीयता र भरपर्दोपन बढाउनु हाम्रो अबको चुनौती हो।’
अधिकारीका अनुसार आईतबार रातीको हुरीवतासका कारण केही स्थानमा विद्युत अवरुद्ध भएको छ ।